ရီပတ်ဘလီကန်အထက်လွှတ်တော် 2016 ခုနှစ်တွင် Re-ရွေးကောက်ပွဲများအတွက် Up ကိုဆံ့
ကိစ္စများ အခြေခံ & သမိုင်း
by Marcus Hawkins က
အတိုက်အခံအနေဖြင့်မည်သည့်ထိုင်ခုံတက်ကောက်နေ၏နည်းနည်းအခွင့်အလမ်းနှင့်အတူမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အမတ်နေရာ 20 ကျော်ခုခံကာကွယ်ဖို့လိုအပ်နေ: 2016 ခုနှစ်, ရီပတ်ဘလစ်ကန်ဒီမိုကရက် 2014 ခုနှစ်ရင်ဆိုင်ခဲ့သည့်ကံဆိုးပြဿနာရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ 2014 ခုနှစ်တွင်ရီပတ်ဘလစ်ကန်အနီရောင်နဲ့ခရမ်းရောင်ပြည်နယ်များအတွက်တစ်ဒါဇင်ကျော်ဒီမိုကရက်ပါတီ-ကျင်းပထိုင်ခုံမှာတရားဝင်ရိုက်ချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ GOP ခြုံငုံထက်နည်းငါး Semi-ယှဉ်ပြိုင်ထိုင်ခုံခဲ့များနှင့်သူတို့၏အမျိုးအလုံးကိုအနီရောင်ပြည်နယ်များရှိကြ၏။ အဆိုပါ 2016 slate တစ်ခုချွတ်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ကြီးမားရီပတ်ဘလီကန်လာဘ်မြင်ဘူးသော 2010 လက်ဖက်ရည်ပါတီလှိုင်းတစ်ခုပြန်လုပ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ GOP များအတွက်ကိစ္စရပ်များရှုပ်ထွေးသည့်တစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်ပါတယ် 2016 သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင် သူတို့နှစ်လယ်ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကိုပြုကြထက်ဒီမိုကရက်မကြာခဏ သာ. ကြီးမြတ်နံပါတ်များကိုထွက်လှည့်အဘယ်မှာရှိ။ ဤအရွေးကောက်ပွဲအတော်များများသမ္မတကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှစ်ဖက်စလုံးတွင်ဖြစ်ကြပြီး coattails ဘယ်လိုသူတို့ရှိသည်ဘယ်လောက်ကောင်းဆင်းလာလိမ့်မယ်။ 2008 ခုနှစ်တွင်ဘရက်ခ်အိုဘားမားအများအပြားဒီမိုကရက်သူတို့မဟုတ်ရင်ဖြစ်ကောင်းအနိုင်ရရှိခဲ့ပါပြီမဟုတ်ဘူးအမတ်နေရာကူညီပေးခဲ့သည်။ ရနိုင်ပါသလား ဟီလာရီကလင်တန် အလားတူအကျိုးကျေးဇူးများကို?
ဒါပေမယ့်ရီပတ်ဘလစ်ကန်အားလုံးကိုမကောင်းတဲ့သတင်းမဟုတ်ပါဘူး။ 2010 တစ်ဦးမောင်းသည့်နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်သော်လည်း, ထိုရွေး-up, အမတ်နေရာအချို့ရိုးရှင်းစွာအဖြစ်မှန်သို့အနေနဲ့ညှိနှိုင်းမှုရှိကြ၏။ Arkansas ပြည်နယ်, Indiana ပြည်နယ်နှင့်မြောက်ဒါကိုတာရီပတ်ဘလီကန်-မိုးသည်းထန်စွာပြည်နယ်နှင့်မဲဆန္ဒရှင်များမှာမရှိတော့ဒါခေါ်ခြင်းဖြင့် bamboozled ခဲ့ကြသည် "အပြာခွေးဒီမိုကရက်။ " ဒါဟာအဖြစ် 2014 ခုနှစ်ဒီမိုကရက်တို့ကရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်အလားတူပြဿနာရဲ့ Obamacare-supporting ကလက်ရှိသမ္မတ 2012 ခုနှစ်တွင်သမ္မတအိုဘားမားဆန့်ကျင်အပြတ်အသတ်မဲပေးကြောင်းပြည်နယ်များအတွက်ပြန်လည်ရွေးကောက်တင်မြှောက် facing ခဲ့ကြသည်။
ဤသည်မှာ 2016 ပါတီမှမစ်ရွမ်နေသာအတွက်အမှုရီပတ်ဘလစ်ကန် Re-ရွေးကောက်ပွဲကိုရင်ဆိုင်နေရရှိရာ 24 ပြည်နယ် 17 အနိုင်ရတကယ်မဟုတ်ပါဘူး။7ပြည်နယ်ကိုအိုဘားမားအနိမ့်-Single-ဂဏန်းအောင်ပွဲ ရှိ. , တစ်ခုတည်းသော blowout အီလီနွိုက်သူ၏နေအိမ်တွင်ပြည်နယ်ခဲ့အများဆုံးအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ထိုသူတို့ကတစ်ဦး blowout အရှုံးနှင့်ရင်ဆိုင်ရနိုင်ကြောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနားယူနေသောဒီမိုကရက်တစ်ကလက်ရှိသမ္မတနဲ့မတူပဲ, အ GOP ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအဘယ်သူအားမျှတကယ်ကသူတို့ပြည်နယ်များအဘို့ဆင်းရဲသားပွဲစဉ်များမှာသို့မဟုတ်အဓိကအားနည်းချက်ရှိသည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ပင်တကယ်အကောင်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းများတခါတရံဆုံးရှုံးနှင့် 2016 ဖွယ်ရှိခြင်းမရှိခြွင်းချက်ရှိလိမ့်မည်။ ဤတွင်ရီပတ်ဘလီကန်-ကျင်းပများအတွက်လူမျိုး 2016 ခုနှစ်တွင်ချွတ် start ဘယ်မှာကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်: အဆိုပါ GOP သူတို့သုံးယောက်ထိုင်ခုံတစ်ဦးအသားတင်အရှုံးခံရနှင့်အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်များ၏ထိန်းချုပ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုလည်းသမ္မတကအနိုင်ရမယ်ဆိုရင်4ဆုံးရှုံးနိုင်ကြောင်း 2016 သို့ဦးတည်ခန့်မှန်းခြေ 54 ထိုင်ခုံရပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါရီပတ်ဘလစ်ကန်ရုံ 10 ဒီမိုကရက်ဘို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 2016 ခုနှစ် 24 ထိုင်ခုံခုခံကာကွယ်ဖို့သတ်မှတ်ထားကြသည်။ 24 အမတ်နေရာ 16 ကို Safe ရီပတ်ဘလီကန်အဖြစ်ပယ်စတင်ပါ။ ဤအကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအများစုဟာကို double-ဂဏန်းမာဂျင်များကအနိုင်ရနေတဲ့သမိုင်းရှိသည်နှင့်အနီရောင်ပြည်နယ်များမှလာကြ၏။ အဆိုပါဖွယ်ရှိလုံခြုံထိုင်ခုံ Alabama အဘိဓါန် (Jeff Sessions), Alaska (Lisa ကို Murkowski), Arkansas ပြည်နယ် (ယောဟန် Boozman), ဂျော်ဂျီယာ (ဂျော်နီ Isakson) အိုင်ဒါဟို (က Mike Crapo), Indiana ပြည်နယ် (ဒံကုတ်အင်္ကျီ), အိုင်အိုဝါ (Chuck Grassley), Kansas ပြည်နယ် (ဂျယ်ရီ Moran များမှာ ), ကီ (Rand ရှင်ပေါလု), မစ်ဆူရီ (ရွိုင်းတုံး), မြောက်ကာရိုလိုင်းနား (ရစ်ချတ် Burr), မြောက်ဒါကိုတာ (ယောဟန် Hoeven), ဥက္ကလာဟိုးမား (ဖွယ်ရှိဂျိမ်း Lankford), တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနား (တိဖြစ်သူ Scott), တောင်ဒါကိုတာ (ယောဟန် Thune) နှင့် utah (သူ Mike Lee က) ။ ဤသင်တန်း၏, အားလုံးအပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်ပေမယ့်ယခုဤသူအန္တရာယ်ကင်းအဖြစ်ပယ်စတင်ရန်ဖြစ်သည်။
ဆမ်း-Up / ရီပတ်ဘလီကန်ပိန်ကြုံ
အရီဇိုးနား - ဂျွန်မက်ကိန်း 2010 ခုနှစ်ကိုအလွယ်တကူပြန်လည်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရသူသည်နောက်တဖန် run ဖို့ရွေးချယ်တော်မူပြီယခုကြောင့်ဖြစ်ကောင်းလုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။
သူကညာဖက်ကနေမူလတန်းစိန်ခေါ်မှုရရှိထားပြီးပါပြီ, ဒါပေမယ့်သူတို့အမကြာသေးမီနှစ်များတွင်မအောင်မြင်ခဲ့ကြပြီ။ 2012 ခုနှစ်တွင်ရီပတ်ဘလီကန်က Jeff အလွှာပဲ3မှတ်အားဖြင့်အရီဇိုးနားကနေအငယ်တန်းထိုင်ခုံအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ဖလော်ရီဒါ - Marco Rubio 2016 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ဆီးနိတ်လွှတ်တော်အဘို့ကို run မည်မဟုတ်ခြင်းနှင့်အစားနိုင်ငံတော်သမ္မတများအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်လာသည်။ ဟောင်းများပြိုင်ဘက် ချာလီ Crist အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ထိုင်ခုံအဘို့အပြေးသည်, လယ်ပြင်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ဖွင့်လှစ်သည်။
Louisiana - ဒါဝိဒ်သည် Vitter သည်သူ၏ gubernatorial ပြိုင်ပွဲဆုံးရှုံးခဲ့ရပေမယ့်လည်းသူက Re-ရွေးကောက်ပွဲကိုမရှာပါလိမ့်မယ်ဖော်ပြထားခဲ့သည်။ အဆိုပါ Landrieu မိသားစုရဲ့အပြင်ဘက်မှာဒီမိုကရက်ကြီးတွေကနိုင်ငံရေးအမည်များအပေါ်ရေတိုဖြစ်ကြသည်။ ရီပတ်ဘလစ်ကန်တစ်ဦးအစိုင်အခဲကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှင့်အတူအလွယ်တကူထိုင်ခုံကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်သင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လယ်တက်ပုံဖော်ဖို့စတင်သည်တိုင်အောင်ရီပတ်ဘလီကန်သာအဖြစ်ပိန်စတင်သည်။
New Hampshire - ကယ်လီ Ayotte ဘားရက်အိုဘားမားအားဖြင့်နှစ်ကြိမ်သယ်ဆောင်နေတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုမမျှော်လင့်ဘဲကြီးမား 20 အထက်အမှတ် margin ကအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
သူမသည်ပြည်နယ်အတွက်လူကြိုက်များနေဆဲဖြစ်ပြီးကျနော်တို့ရွေးကောက်ပွဲနီးကပ်လာ get အဖြစ်အလွန်အလွယ်တကူလုံခြုံကော်လံသို့ဆင်းသက်နိုင်ပါတယ်။ သူမသည်ဒီမိုကရက်တစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမဂ္ဂီဟာဆန်ကစိန်ခေါ်ပါလိမ့်မည်။
အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ် - ရော့ Portman လည်းအထူးသဖြင့်လွှဲ-ပြည်နယ်စံချိန်စံညွှန်းများက 2012 ခုနှစ်မှာကြီးမားတဲ့ margin ကအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သူသည်သမ္မတကို run ရန်ဆုံးဖြတ်သည် အကယ်. သူအမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်မှ Re-ရွေးကောက်ပွဲကိုမရှာပါလိမ့်မယ်ဖော်ပြထားခဲ့သည်။ သူက run မပါဘူးဆိုရင်, 2012 ဆန်ခါတင် Josh ကထပ်လောင်းအဆိုပါ GOP များအတွက်ထိုင်ခုံကိုကိုင်ထားရန်လျောက်ပတ်သောရိုက်ချက်ရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်တစ်ဦးရန်ပွဲဖြစ်လိမ့်မည်။
အီလီနွိုက် - မာကု Kirk ကသူသည်မိမိဘက်မှာရရှိလာသောရာထူးဌာနန္၏အားသာချက်ရှိသည်လိမ့်မယ်သော်လည်းနိုင်ငံတော်သမ္မတများအတွက်ရီပတ်ဘလီကန်ဆန်ခါတင်ပုလုပ်မပေးနိုင်လျှင်, 2016 တာပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ကစားလယ်ပြင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် 2010 ခုနှစ်ထက်နည်း 2-မှတ်ခြင်းဖြင့်ဘရက်ခ်အိုဘားမားမဟာမိတ် Alexis Giannoulias ရှုံးနိမ့် ပြည်နယ်အပြိုင်အဆိုင်။ Tammy Duckworth ကသူ့ဖွယ်ရှိပြိုင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။
Pennsylvania ပြည်နယ် - Pat Toomey 2010 ခုနှစ်တွင်မဲ 51% နှင့်အတူအနိုင်ရပေမယ့်ဒီအခွအေနမြေား၏အများဆုံးကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲအောက်မှာဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအခြေအနေများအများကြီးလျော့နည်းကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲဖြစ်လိမ့်မည်နှင့်ဒီမိုကရက်သူတို့ရဲ့အနည်းငယ်ကြီးတွေရွေး-up, အခွင့်အလမ်းများကိုတစ်ဦးအတွက်တစ်ဦးထိပ်ဆင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဘို့ကြိုးစားပါလိမ့်မည်။ သို့သော်သူတို့ကဒါဝေးနေတဲ့အစိုင်အခဲကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဝှမ်း coalesce ဖို့ရုန်းကန်ပါပြီ။
Wisconsin ပြည်နယ် - ဤဖြစ်ကောင်းအများဆုံးမျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ်ရှိထိုင်ခုံဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ Wisconsin ပြည်နယ်မှထွက်တွက်ဆဖို့ပဲခဲယဉ်းပြည်နယ်ကြောင့်ကြောင့်အဓိကအားဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကနှစ်ကြိမ်ဘားရက်အိုဘားမားနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်မဲပေးနှင့်နှစ်ကြိမ်တိုင်းပြည်အတွင်းအများဆုံးရှေးရိုးစွဲအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်နိုင်သည်သူကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်သူ Scott Walker က, အဘို့မဲပေးပြီးပြီ။ Russ Feingold ကသူ့ဟောင်းထိုင်ခုံကျောအဘို့တွင် Ron Johnson ကစိန်ခေါ်နေသည်။
2016 ခုနှစ်တွင်ခုခံကာကွယ်ဖို့ 24 ထိုင်ခုံရှိခြင်းနေသော်လည်းအမှုအရာတွေအများကြီးပိုဆိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နေရာတစ်ဦးကအများစုရီပတ်ဘလစ်ကန်များအတွက်လိုလိုလားလားထူထောင်။ ယင်းလူမျိုးသဘာဝဒီမိုကရက်တစ်အတိမ်းစောင်းရှိတယ်ဘယ်မှာရှိသည့်ရီပတ်ဘလစ်ကန်ရုံကယ့်ကိုအကောင်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းများမဟုတ်ဘဲရုံကြောင့်သမ္မတအိုဘားမား-ပုနျကနျအနိုင်ရဖြစ်ပျက်တဲ့သူကံကောင်းဆုရရှိသူဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာနှစ်ရီပတ်ဘလစ်ကန်တတ်နိုင်သမျှရွေး-up, အခွင့်အလမ်းများများကြောင်းကိုမြင် 2012 ခုနှစ်အလွန်ဆင်တူ 2016 လေတိုက်တက်, လာမယ့်အပြီးတဦးတည်း "ရွေးကောက်ပွဲ" ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစုဆောင်းအလွန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်င်, ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
ထိပ်တန်း 10 ကွန်ဆာဗေးတစ် Advocacy အဖွဲ့များ
မက္ကာ၏ Quraysh နှယျ
ပါကစ္စတန်ရဲ့ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI သို့မဟုတ် Inter-Services Intelligence ဆိုတာဘာလဲ
အဆိုပါ Barbary Pirates နားလည်ခြင်း
ရှေးဟောငျးအီဂ Times သတင်းစာကနေယနေ့ခေတ်တွင်ရန်ဆိုင်းနိုင်းကျွန်းဆွယ်
ကောလိပ်ကျောင်းသားများ 24 Fantastic Website များ
လိမ် Galaxy: အဠာ၏ Pinwheels
မည်သူမဆိုဂစ်တာအပေါ်သင်ယူနိုင် 10 လွယ်ကူနိုင်ငံသီချင်းများ
ဟယ်လိုသို့မဟုတ် Samhain များ၏သမိုင်း, လူသေများနေ့
ဂျပန် Suteki ၏အဓိပ္ပာယ်ကို
သင်ကအစဉ်အဆက်ကျွမ်းဘား Shawn ဂျွန်ဆင်အကြောင်းသိထားမှ Wanted အရာအားလုံးကို
ထုတ်လုပ်သူ Ron Howard Discussions "Curious ဂျော့ခ်ျ"
သင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ် Capture ဖို့ကို Creative အယ် manga ကိုအနုပညာ
"ဧဒုံပင်လယ်အတွင်းဖမ်းမိဧရာ Python ကို" ဗီဒီယိုမေးလ်အတု Is
အဆိုပါတတိယပြင်ဆင်ချက်: စာသား, Origins နှင့်အဓိပ္ပါယ်
ပွငျသစျထဲတွင် (ပေးရန်, ပရိဘောဂမှ) "Fournir" Conjugate လုပ်နည်း
10 Pu ကိုအချက်အလက် (ပူးသို့မဟုတ်အနုမြူနံပါတ် 94)
ယင်းသတ္တု Detector ၏သမိုင်း
ကျူးဘားထိပ်တန်းရွေးချယ်မှုများ - ကျူးဘား၏ဂီတခရီးစဉ်
သက်တောင်စာရှုသူများအဘို့ယာကုပ်က Fenimore Cooper ကအားဖြင့်အလုပ်လုပ်တစ်များစာရင်း